Onye Nkuzi: Akwụkwọ Akụkọ Ugbu a
Ndị ọrụ Editorial
Akwụkwọ akụkọ kacha ọhụrụ nke ndị ọrụ Editorial
Standard Chartered Bank Recrutment 2021/2022 Ntinye Akwụkwọ Mpempe akwụkwọ
gbara akwụkwọ Job by Ndị ọrụ Editorial na July 23, 2021	• 0 Comments
Standard Chartered Bank Recruitment 2021: Edebere ibe a maka ndị nwere mmasị na-achọ ịmara mgbe Standard Chartered Bank ga-ewe ndị gụsịrị akwụkwọ na 2021. Agbanyeghị, ọ bụ maka nchegbu gị na anyị ga-eme ka ị nweta ọkwa ọhụrụ nke 2021 Standard Chartered Bank gụsịrị akwụkwọ nkọwa na ibe a. Standard Chartered PLC bụ […]
Gaa n'ihu Ọgụgụ »
Tinye Ugbu a Maka Mgbasa Ozi Gụsịrị akwụkwọ nke ExxonMobil 2021
gbara akwụkwọ Job by Ndị ọrụ Editorial na July 22, 2021	• 0 Comments
Tinye akwụkwọ maka ugbu a maka ndị gụsịrị akwụkwọ na ExxonMobil 2021: you na-achọ ọrụ ExxonMobil na Nigeria 2021? Ọ ga-amasị gị ịrụ ọrụ na ExxonMobil? Ọzọkwa, ị gaghị eche ma ọ bụrụ na anyị duzie gị otu ị ga - esi tinye akwụkwọ maka ntinye n'ọrụ ExxonMobil na Nigeria na gafere? Ọ bụrụ ee, gaa n'ihu gụọ. ExxonMobil Corporation bụ ụwa […]
ExxonMobil Mbanye 2021/2022 Lelee Mmelite Ntinye Ngwa
gbara akwụkwọ Job by Ndị ọrụ Editorial na July 22, 2021	• 46 Comments
Ntughari ExxonMobil 2021 - you maara banyere Mbupu ExxonMobil 2021? Ọ bụrụ mba, mgbe ahụ ọ nweghị ihe kpatara ụjọ. Isiokwu a ga - enye gị ozi niile dị mkpa ịchọrọ na ExxonMobil 2021. Nke a bụ iji gwa ọha na eze na ExxonMobil Recruitment 2021 amalitela. Ana m agba onye ọ bụla nwere mmasị ume ka ọ gụọ […]
Ndị uweojii na-ahụ maka ndị uweojii na Naijiria ka ha weghachite 2021 Ngwa Ọrụ
Mmelite na-ewe ndị uwe ojii Naijiria: ọkwa dị mkpa nye ndị anamachọ ndị chọrọ itinye akwụkwọ maka ndị akpọrọ ndị uweojii na Naịjirịa na 2021. Lee nkọwa ndị ọzọ n'okpuru; You nọ n'etiti ndị na-achọ maka ndị uweojii na-ahụ maka ndị uwe ojii nke Nigeria na nyocha emere 2021 n'oge na-adịbeghị anya? Ndi ama uche gị screening ụbọchị ruru ka mkpa na isi ihe mere na ugbu a na-achọ ka […]
Ntinye nke DPR www.dpr.gov.ng 2021/2022 Portal Mpempe akwụkwọ
gbara akwụkwọ Job by Ndị ọrụ Editorial na July 22, 2021	• 33 Comments
DPR Mbanye www.dpr.gov.ng 2021: DPR Nbanye 2021 ụdị ntinye akwụkwọ apụla! Ngalaba Petroleum Resource amalitela nke ọma ịbanye n'ọrụ maka ndị nnọchi anya 2021. Na-achọ ọrụ na ụlọ ọrụ mmanụ, ọ bụrụ na ee, achọla n'ihu n'ihi na ịnọ na ibe. Peeji a ga - eduzi gị otu esi etinye akwụkwọ maka […]
UNIUYO SCE Postgraduate Admission Form 2021/2022 Oge Ọmụmụ
gbara akwụkwọ Akwụkwọ Akụkọ ụlọ akwụkwọ by Ndị ọrụ Editorial na July 22, 2021	• 1 Comment
UNIUYO SCE Postgraduate Admission Form: Mahadum Uyo (UNIUYO) na-erezi akwụkwọ nke School of Continuing Education (SCE) maka nnabata Postgraduate maka diplọma nke Postgraduate, Masters, Doctorate and Professional Programs maka oge agụmakwụkwọ 2020/2021. Nọgide na-agụ iji hụ nkọwa ndị ọzọ n'okpuru. A na - akpọ ndị mmadụ òkù ka ha nwee ike ịbanye na diplọma Postgraduate, Masters, […]
JAMB Nsonaazụ Nsonaazụ Mbipụta 2021 Lee Nkọwa Lee
gbara akwụkwọ Nyocha, Ozi Jamb by Ndị ọrụ Editorial na July 22, 2021	• 10 Comments
A na-agwa ndị Candidates sonyere na 2021 JAMB UTME na mbipụta nke nsonaazụ mbụ JAMB amalitela maka oge 2021/2022. na-agụ iji chọta nkọwa ndị ọzọ n'okpuru. Ozi a bụ maka ndị ga-eso na 2021 Unified Tertiary Matriculation Examination (UTME) na afọ ndị gara aga, nke Joint Admission […]
UNIABUJA Post UTME 2021/2022 Forming Screen, Eligibility na Oge ikpebi
gbara akwụkwọ Akwụkwọ Akụkọ ụlọ akwụkwọ by Ndị ọrụ Editorial na July 22, 2021	• 55 Comments
UNIABUJA Post UTME 2021: Mahadum nke Abuja, chọrọ ịgwa ndị niile chọrọ ịbanye na wepụta akwụkwọ nnabata Post UTME maka afọ 2020/2021. Ndị nwere mmasị na-enyocha akwụkwọ kwesịrị ịgbaso ụzọ dị n'okpuru maka ngwa nke ọma. UNIABUJA Post-UTME cut-off mark is 180. Nchịkwa nke Mahadum Abuja (UNIABUJA) na-akpọ ndị tozuru etozu tozuru etozu ya […]
UNIUYO Post UTME 2021/2022 Forming Screen, Eligibility na Oge Ikpeazụ
gbara akwụkwọ Akwụkwọ Akụkọ ụlọ akwụkwọ by Ndị ọrụ Editorial na July 22, 2021	• 200 Comments
UNIUYO Post UTME 2021: Mahadum Uyo, UNIUYO chọrọ ị gwa ndị niile chọrọ ịbata akwụkwọ ka ewepụtara akwụkwọ nnabata Post UTME maka nnọkọ agụmakwụkwọ 2020/2021. Ndị nwere mmasị na-enyocha akwụkwọ kwesịrị ịgbaso ụzọ dị n'okpuru maka ngwa nke ọma. Otu esi etinye maka UNIUYO Post UTME / Admission Screening tozuru oke tozuru oke kwesịrị ịkwụ ụgwọ a na-abụghị nkwụghachi ụgwọ nke […]
Akwụkwọ Rotary Foundation Global Scholarship 2021 nyere maka mmepe.
gbara akwụkwọ Nkuzi mmuta by Ndị ọrụ Editorial na July 22, 2021	• 0 Comments
N'isiokwu a, m ga-akọwa n'ụzọ zuru ezu, otu esi etinye akwụkwọ maka Rotary Foundation Global Scholarship 2021. Aga m enyere gị aka ịghọta ihe niile site na ime ka nkọwa m dị mfe. Nọgide na-elekwasị anya ma na-agụ site na. Rotary Foundation na-enye ego mmụta site n'aka Rotary Foundation Global Grant. The scholarships na-enweta ego gụsịrị akwụkwọ na agụmakwụkwọ ma ọ bụ nyocha maka […]
Julaị 2021 Obi isterbọchị ọmụmụ ụbọchị ọmụmụ Nwanyị Nwanyị Quotes na Ozi Na-agba Ha
www.immigration.gov.ng/recruitment 2021dị XNUMX Portal Updates
www.nouonline.net rụpụtara: National Open University Result Checker 2021
Julaị 2021 Na - adọrọ adọrọ Mortụtụ Chi Buru n’uche na Ederede Etu Etu bido ụbọchị gị
Chalọ Ọrụ Na-ahụ Maka Chalọ Ọrụ Na-ahụ Maka Chalọ Ọrụ Na-ahụ Maka Nleba Anya na 2021 www.sc.com
United Nations World Program Program Recrutment 2021/2022 Ntinye Akwụkwọ Mpempe akwụkwọ
United Nations World Program Program Job Portal 2021 www1.wfp.org
Ndị Ọchịchị Gọọmentị Colombia na Ọkachamara PhD 2021/2022 mmelite
Vanier Canada gụsịrị akwụkwọ na gụsịrị akwụkwọ 2021 maka ụmụ akwụkwọ Postgraduate
Undergraduate Global Excellence Scholarship na Mahadum nke Exeter 2021
Jeff Bezos ọ dị na mbara igwe ugbu a? si Amazon gaa NASA
Julaị 2021 Funny Birthday Wishes, Messages and Quotes
ExxonMobil Nigeria Mbanye na 2021/2022 Mmelite kachasị ọhụrụ
ExxonMobil Graduate Mbanye Portal 2021 www.corporate.exxonmobil.com